Dowladda Afganistaan oo xabad joojin ku dhawaaqday | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Dowladda Afganistaan oo xabad joojin ku dhawaaqday
Dowladda Afganistaan oo xabad joojin ku dhawaaqday
August 20, 2018 16 -: Ashraf Ghani Madaxweynaha wadanka Afganistaan ayaa ku dhawaaqay xabbad joojin ay shuruud ku xiran tahay oo lala galo kooxda Taliban,si loo nabadeeyo dalkaasi,islamarkaana loo bad baadiyo dhiiga shacabka,isagoo xusay in Xabad joojintani ay billaabanayso in aan lagaarin munasabadda ciidda.
Waxaa la filayaa in Xabad joojinta uu ku dhawaaqay madaxweyne Ghani ay socon doonto muddo saddex billood ah,taasi oo shaki laga muujinayo in kooxaha Taalibaan ay hirgelindoonaan iyo in kale,maadaama weli aanay jirin wax war ah oo ka soo baxay kooxda Taliban.
Dhanka kale Xoghayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Janaraal Jens Stoltenberg ayaa soo dhaweeyay xabbad joojinta uu soo bandhigay Mr Ghani,isagoon muujiyay in ay tahay mid bad baado u ah shacabka,sidoo kalena Mr Stoltenberg wuxuu ugu baqay kooxda Taliban in ay xushmeeyaan xabbad joojinta uu iclaamiyay madaxweynaha wadankaasi Ashraf Ghani.
Maalmihii la soo dhaafay waxaa ka jiray magaalada Ghazni iyo meela kale oo dalkaasi ka tirsan,dagaal xoogan oo u dhexeeyey Taalibaan iyo ciidamada Dowladda oo taageero ka hela gaashaan buurta NATO.
Horey ayaa waxaa u jirtay in labada dhinac ay wada fuliyeen heshiis xabad joojin ah xili loo dabaal degayay munaasabadda ciidul Adxa,lamina saadaalin karo in ciidan ay wada xushmeen doonaan heshiiskaasi labada dhinac.
Previous articleGudoomiyaha Maxkamadda Sare ee dalka oo shaqadii ka joojiyey hawlwadeeno ka kala tirsan Maxkamadaha darajada 1aad iyo 2aad.
Next articleTalyaaniga oo cabsi kamuujiyay qatar ka dhalan karta isticmaalka 22 Buundo